Oromonni Yaada Walii Kabajuu Qabna! – YEROOBLOG
Oromonni Yaada Walii Kabajuu Qabna!
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Politics, Social Commentary	 August 28, 2015 December 25, 2015 2 Minutes
Gidduu kana miidiyaa hawaasummaarrattis ta’ee miidiyaa kaanirratti dhimmi Oromoota walfalmisiisu tokko jira. Innis, “Oromoonni biyya alaa jiraatan (warra diyaaspooraa), ayyaana diyaaspooraa Mootummaan Naannoo Oromiyaa qopheesserratti hirmaachuu qabumoo hin qabani?” kan jedhu dha. Dhimma kana akkan hordofaa turetti namoonni baay’een, hayyoota keenya kan siyaasaafi diinagdee xiixalan dabalatee, Oromoonni diyaaspooraa guyyyaa diiyaasooraa qophaa’ee irratti hirmaachuu akkasumas Oromiyaatti deebi’anii invastii gochuu hinqabanii yaada jedhu qabu. Kanaaf immoo sababa hedduu kaa’u. Anaan yaadni isaan kaasan hedduunsaa na amansiiseera.
Garuu, Oromoonni diyaaspooraa gara Oromiyaatti deebi’anii invastimantii adda addaarratti yoo bobba’an uummata keenya fayyaduu ni danda’u jedheen amana. Waa tokko yeroo hundaa kalatti tokko qofaan ilaaluu hinqabnu. Eeyyee beekamaadha; Itoophiyaa keessa haalli jiru salphaadha jedhanii amanuun gowwumaadha-keesumaa Oromootaaf. Kana jechuun garuu rakkinni waan jiruuf qofa guutumaa guutuutti uummata keenya rakkina guddaa(dinagdee fi siyaasaa) keessa jiru irraa dheessuu qabna jedhee hin amanu. Hamma naaf galutti (yoon dogongore nasireessuu dandeessu)qabsoon dirqama biyya alaa qofatti murtaa’uu hinqabu. Uummanni keenya akka qabsoonsaa galma ga’uuf, diinagdeetiin humna horachuu qaba. Gaafa diinagdeetiin cime, uummanni keenya qabsoo gochaa jiruu ariifachiisuu nidanda’a jedheen yada.
Haga guyyaa uummanni keenya guutumaa guututti bilisummaa argatuuti, Oromiyaatti deebinee waa takkallee hojechuu hinqabnu jennee yaaduun keenya hamma tokko mootummmaa biyya bulchaa jiruratti dhiibbaa ga’uu ni danda’a ta’a. Harka caalaa kan miidhamu garuu uummata Oromooti. Yerootti diyaaspooraan saba kaanii dhufani uummata Oromoo lafasarraa buqqisiisanii irratti ofmisoomsanitti, nutimoo halaala teenyeee, miidaayadhaan qofa balalefachuun keenya gahaa miti.
Kanaaf Oromoonni diyaaspooraa gara Oromiyaa dhufanii, dhiibbaa siyaasaa fi rakkina adda adda isaanirra ga’u danda’u obsanii uummata Oromoo isa osoo qabeenya qabuu hiyyoome kana, hamma humna isaanii hiyyuma keessaa baasuuf yoo hojjetan gaarii ta’a yaada jedhun qaba. Diyaaspooraan Oromoo, Oromiyaarratti invastii yoogodhan dargagoota Oromoo carra hojii dhabanii magaalota Oromiyaa hedduu keessatti karaarra akka qoraanii dhaabachaa oolaniif carra hojii uumuu ni danda’u. Diyaaspooraan Oromoo kanaan dura gara biyyaatti deebi’anii, karakanaa waa guddaa hojjetan ni jiru.
Fakkeenyaaf, kanneen Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa dhaaban hedduunsaanii Oromoota biyya alaa jiraachaa turani. Abbaan qabeenya Hoteela Ilillee (magaala Finfinnee kan jiru) nama waggaa hedduuf biyyaa alaa jiraatedha. Dargaggoota Oromoo hedduuf hoteela kana keessatti carra hojii guddoo uumeera. Abbaan qabeenyaa Hospitaal Adaamaa ( magaala Adaamaa keessa kanjiru) diyaasporaa ture. Innis akkasuma wanta uummata Oromoof ta’u guddoo hojjechaa jira. Kaneen barumsarratti invastii godhan baay’een ni jiru. Abootii qabbeenyaa 2020 Open College, New Generation University College, US Open College, Harambe College fi KKF dhaabbilee barnoota olaanoo ilmaan Oromoo biyya ambaa turaniin kan hundeefamannidha. Dhabbilleen barnootaa kunneen ijoollee Oromoof carra barumsaa fi carraa hojii hedduu uumaniiru. Kan ani maqaa dhahe malee Oromooni diyaaspoora hojii uummata saaniif ta’u hojechaa jiran hedduudha.
Haata’u malee, Oromoonni diyaasporaa Oromiyaa dhufani haalli mijachuufii didee deebi’anii kanneen deemanis hedduu dha. Anaaf garuu kan naacaalu warra dhufee deebi’e osoo hintaane warra kutatee ”waan fedhe haadhufu; asumatti uummata koo wajjin du’uu naawayya,” jedhanii beekumsaa fi qabeenya qabaniin uummata Oromoo tajaajiluuf kutannoodhaan warra Oromiyaa keessatti hafanidha.
Beektonni siyaasaaa, seenaa fi diinagdee xiinxala adda adda kennuun isaanii baay’ee barbachisaadha; itti fufus qaba. Oromoonni diyaaspoora jiranis xiinxala (analysis) kanneen erga hordofanii booda murteerra ga’uun gaheesaaniiti. Nuti isaanii murteessuu hindandeenyu. Oromoonni diyaasporaa wallaltota natti hinfakkatani. Haala jiru ilaaluu fi madaaluu kan danda’an natti fakkaata. Ga’een xiinxaltootaa dhugaa lafa jiru itti himuu qofa. Kanneen “yoo gara biyyaatti deebine uummata Oromoo waanta fayyadnu tokkollee hinqabnu; asuma teenyee qabsoo uummanni keenya gochaa jiru deeggarra, ” jedhanii amanan qabsoo isaanii itti haafufani. Kanneen ”yoo Oromiyaatti deebine waa xiqqoo taatullee, bu’aa uummata keenyaaf buusuu dandeenyaa,” jedhan immoo Oromiyaa dhufanii haadalagani.
Oromoota diyaasporaa gara Oromiyaatti deebi’an arabsuun, abaaruun, maqaa xureessuun bu’aa kanqabu natti hinfakkaatu. Oromoota diyaaspooraa”Oromiyaatti deebi’uun uummata Oromoof bu’aa hinbuusuu,” jedhanii yaadanis ta’e, kanneen “Oromiyaatti deebine uummata Oromoo hamma haalli nuu eeyyameetti uummata keenya tajaajilu yaalla,” jedhanii yaadanii kabajuu qabna. Oromoon yaada walii yoo kabaje malee rakkina isaaf furtuu argachuu hindanda’u-kun yaaad kooti; mee isinimmoo yaadaa keessan nuuqoodaa.
Previous Post A man charged of ‘Terrorism’ enjoying unprecedented freedom in Prison?
Next Post የጋዜጠኛነት ስራ ራስን ግራ አጋብቶ ሌላዉን ግራ ማጋባት አይደለም